Antigua neBarbuda Real Estate LOT-AG09
(Ugari hweAntigua neBarbuda kune mugove weTolumnia Orchids)
Kutengeswa kwemugove wehotera kuwana Antigua neBarbuda ugari
Tikugashirei kuTolumnia Orchids, Ondeck Living's zvakavanzika zvivakwa boutique. Idzi dzimba mbiri dzakakura uye dzakashongedzwa zvine hunyanzvi dziri munzvimbo yakakwidziridzwa ine inoshamisa maonero egungwa uye mune 1,5 maeka epaki yenyika.
Uyu mukana wakasarudzika wekudyara mune yakasarudzika real estate muAntigua. Tolumnia Orchids chirongwa chakatenderwa chekuvandudza pasi peAntigua Citizen nehurongwa hweInvestment. Ichi chirongwa chakabudirira chidiki chevaridzi chine zvikamu zvinomwe chete zvichiripo.